DEG-DEG: Ciidanka PSF & PMPF oo isku hor-fadhiya garoonka diyaaradaha Boosaaso – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
May 23, 2022 Xuseen 9
Wararka ka imaanaya caasimadda ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa sheegay in Ciidammo ka wada tirsan Ciidammada Difaaca Puntland ay isku hor-fadhiyaan agagaarka garoonka diyaaradaha Boosaaso.
Ciidammada oo kala ah Ciidanka PSF ee uu hoggaamiyo Maxamuud Cismaan Diyaano, iyo Ciidanka PMPF, ayaa isku horfadhiya albaabka hore ee garoonka.
Xiisadda lama yaqaan waxay ka dhalatay, balse Xariirka ciidankan ayaa hooseeyaa, waxaana mudooyinkii u dambeeyey ka dhaxeeyey xurguf ay reeben xaaladdaha siyaasadda ee gudaha Puntland
Rooble wali resulwasare
Ayuu is uhaystaa
Tankale dhaqankii farmaajo baabiyay ee safafka sodhawaynta ayàa bilaabay
Kalsoni darada jirto
Ayay kutusaysaa shantii sano mahayno farmaajo faylal
Dhaadheer loosamay taas
Waa bilaabay waliba shidaalka
Kirada baabuurta iyo expensive ka wasaarada maliyada ayaa lagudalici
Doonaa I’m very sorry somali
Lost direction again
Saynab Xaaji Ali says:
Saaxiib Mohamed waxaad u baahan tahay dhaqtar ee isdawee.
Puntland ma sidan baa u dambeysay? Sidii tolweynihii lahaa ee wada dhistay marba beel loo riixayay ayay maanta iskugu soo uruurtay in jiffooyin hoose oo isku reer ah si xishood iyo xayo la’aan ah ugu dul batariyaan, amnigeeda khalkhalgeliyaan, sumcaddeedana kaga digtaan.
Haddiiba dhaqankii loo ciirsan jiray juuqba lagawaayay oo mid walba buulkiisa foolxumadan kasoo daawanayo rajadu mafiicna wallee. Meeye waxgaradkii isugujiray cuqaasha, aqoonyahannada, iyo culimada? Maxaa iyagana haleelay oo wada aamusiiyay?
In badan baan halista noocan ah kasoo diyayay oo kutalinayay in Puntland dib loogu saleeyo sooyaalkeedii suubbanaa ee tolweynahan taajka madaxa u saaray inta ay goori goor tahay. Maanta oo kale runta iyo xaqa lagama gabbado e dhimbil sideeda ayaa looqaniinaa.
Degelkii dhammaa ee dalka ugushidnaa mooryaan uu Saciid Dani kaabbe kayahay ayaa loo banneeyay oo qummaati ugu diganaya. Waa in tawraddu hulkanto oo kacdoonkeeduna qarxo. Maxaa lalasugayaa oo haray?
Ruqiya Xaaji Dheere says:
Waan fahmi karaayoo waxaad noqotay nin karameed tol la damqada waayey. Waxaanse ka xumahay in weli aad rajo ka sugaysid odayaashii dhaqanka ee dufoobay, oo jaadkii, khamradii iyo laaluushka baratay. Kii boqorka sheegtay ayaa qori dab leh la wareegaya.
Balse ha walwalin walbaan kuu ogahay wiigan dabadiise. Mohamud Dayaano oo la jiiday ayaad arki doontaa inshallah.
Guuldaradii ku dhacday Deni weli waa ka soo Kici la’ yahay. Xoolihii iyo kuraastii uu boobay waa laga soo furtay kaaga sii darane aaranshaydaan khayre ayey ka raacday. Laakiin waxa taa ka sii darnaa labadii kursi ee xurmadle islaan bashiir ku ixtiraami waayey ee uu harcad caadimadii riyoole ka huleelay in mid ka mid ahi khayre u codeeyey. PMPF wuxuu u dhiibtay wiil uu adeer u yahay debiraweyne oo gurigiisa ku koray. Wuxuu ka dhigay xaafadii ilma dani. Debiraweyne wuxuu baryayaa raiisal wasaare aanu uba qalmin. Somaali inagoo arkayna waa diideen dhagar qabaha. Cododkuu helay waa intuu boobay. Debiraweyne si xun ayaa loo dhaawacay. No hope.
AHMED SXB SACIID DENI WAXUU XAMAR U AADAY 1) INUU VILLA SOOMAALIYA KA SAARO FARMAAJO.
2) INUU UMADDA KA AAMUSIIYO KOOXDII AKHLAAQDA DARNEYD EE CAAYDA BADNEYD EE CBB(CAYAYAANKA BARAHA BULSHADA).
MAASHALAH DENI WAAD GUULEEYSATAY.
markii sharciga laga dambeyn waayo waxaa dhaca mooryaanimadaan oo kale. ilmo diyaano waxay noqdeen dowlada ka garab dhisan dowlad kale. waji fiican kama muuqdo puntland. marar badan ee aan halkaan ka dhiibtay fikirkeega ayaan ka dhigay in dhibaatooyin badan dhici doonaan hadii aan arinkaan lasoo afjarin oo sharcigu sareyn. eroboorka waxaa ku xigin furdada oo laysku qabsado.
Warka maad si sax ah u sheegtaan.
Ma waxa lasku hayaa daqliga airaboorka
Ma qas baa bilaawday oo Puntland baa ninba rabaa in gobol xirto?
Ma cinqilaab baa socdo Deni ka dhan ah?
Ma Karaash ayay kala taabacsanyihin PSF & Pmpf?
Ma ilaha daqli baa lala wareegin si PUNTLAND u shaqayn?
Ma Den baa kasoo degaayo airborka oo laga hor jogsan?
Intaas mid ayaa jira ee xog ka kena
Diyaano waqtigiisa waa dhamaadey qarash villa da waa soo xirmey had waa in uu isbaaro dhigtaa meel kale uu kubaxsado malaha waa laga taqalusi inshalah